Halkee ku dambeesay gogashii dib u heshiineed ee madaxweynaha Puntland uu fidiyay? - BANDHIGA
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay halka ay ku dambeysay gogosha uu horay u shaaciyay in uu u dhigay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Deni ayaa sheegay in Madaxda Dowladda uu u gudbiyay casumaadda shirkaas, balse illaa iminka aysan jirin jawaab kaga timid dhankooda, sidaas awgeed waxa uu tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo ay ka sugayaan go’aanka ugu dambeeyo.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay in dhibaatada ka dhalatay Coronavirus, in aan laga maarmin isla shaqeyn heer federal iyo heer Dowlad Goboleed, maadaama ay mas’uuliyad wadajir ah wada saaran tahay.
“Maadaama adduunku uu khatar ku jiro, lana saadaalin Karin muddada uu soconayo cudurka Corona, waxaa lagama maarmaan ah in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee gayiga Soomaaliyeed ka jira la dhameeyo, waa muhiim in la wada shaqeeyo, Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan u gudbiyay in waqti waliba aan diyaar u ahay dhigista gogosha balse jawaab kama hayo” sidaasi waxaa yiri Siciid Cabdullaahi Deni.
By : Press room Tags: Halkee ku dambeesay gogashii dib u heshiineed ee madaxweynaha Puntland uu fidiyay?